१२ असोज, काठमाडौं । के तपाईं दसैंबिदाको फुर्सद किताब पढेर बिताउने तयारीमा हुनुहुन्छ ? त्यसो हो भने पुस्तक छान्नका लागि साझा प्रकाशनले काठमाडौंको सभागृह परिसरमा आयोजना गरेको पुस्तक मेला उपयुक्त थलो बन्न सक्छ ।...
पत्रपत्रिकामा व्यापक हल्ला भयो । रेडियो, एफ्. एम्.का लागि गहकिलो विषय बन्यो । सानो उमेरमा कमाएको उसको प्रतिष्ठा खाक भयो, अड्कल काटे विज्ञहरूले । नपुगेको के थियो र ? आइमाईको बुद्धि घिच्रोमा हुन्छ भनेको...
१२ असोज, काठमाडौं । शनिबार सरकारी विदाको दिन एकाबिहानै सेतो प्लेटको सरकारी मोटरसाइकल लिएर घुम्न निस्किएका एक युवा पुरानो बानेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको फन्दामा परे । म सरकारी कर्मचारी हुँ भन्दै उनले सानका साथ चालक...
१२ असोज, काठमाडौं । चुनावी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आज संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ । राष्ट्रसंघ महासभाको आजको विहानी सत्रमा मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मी सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सम्बोधनका क्रममा रेग्मीले आसन्न...
१२ असोज, काठमाण्डौं । नेपाल टेलिकमको मोवाइल सेवा अवरुद्ध भएको छ । गएराति देखि अवरुद्ध सेवा अझै सुचारु हुन सकेको छैन् । प्राविधिक कारणले सेवा अवरुद्ध भएको नेपाल टेलिकमको कार्यालयले जनाएको छ । प्राविधिक...
११ असोज, काठमाडौं । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिमा आवद्ध प्रमुख तीन दल र आन्दोलनरत ३३ दलका नेतावीच शुक्रबार अकस्मात वार्ता भएको छ । ललितपुरमा सम्पन्न वार्तामा मंसिर ४ को चुनाव सार्ने र खिलराज रेग्मीलाई प्रधानन्यायधीश...
११ असोज, काठमाडौं । नेकपा माओवादीले ७० वर्षीय वृद्ध विदेशीलाई कारवाही गर्ने हो भने सैभन्दा पहिले अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर र भारतीय विदेश सचिव एवं युरोपियनराजदूतलाई कारवाही गरेर देखाउन सरकारलाई चुनौती दिएको छ...
बर्खास्तीविरुद्ध मायाकुमारी अदालत जाने
११ असोज, काठमाण्डौ । कुटनीतिक मर्यादाविपरित काम गरेको भन्दै बर्खास्त भएकी कतारका लागि नेपाली राजदूत मायाकुमार शर्मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयविरुद्ध अदालत जाने भएकी छन् । ‘बर्खास्त गरिएको भन्ने कुरा मिडियामार्फत् थाहा पाएँ, अहिलेसम्म औपचारिक पत्र...
११ असोज, काठमाडौं । राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले नेकपा-माओवादी पनि विदेशी शक्तिबाट सञ्चालित भएको आरोप लगाउनु भधएको छ । शुक्रबार राजधानीमा भएको दशैं तिहारको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा केसीले भन्नुभयो-‘नेकपा-माओवादीले चार दलले विदेशी प्रभावमा...
११ असोज, काठमाडौं । दाङको निर्वाचन क्षेत्र नं ५ घनश्याम सुनार र दाङ-४ का ईश्वरी सुनार नेपाली काँग्रेसबाट समानुपातिकमा सिफारिस भएपछि नेताहरूलाई भेट्न काठमाडौँ आएका छन् । केन्द्रीय सदस्य शशाङ्क कोइरालाको निवासमा भेटिएका उनीहरूले...
११ असोज, नेपालगन्ज । 'चिना हराएको मान्छे'का लेखक तथा चर्चित हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य हराएको चिना खोज्दै नेपालगन्ज पुग्नुभएको छ । हास्यव्यंग्य, गायन र कलाकारितामा पोख्त आर्चाय पुस्तक लेखनमा आएपछि पहिलोपटक नेपालगन्जमा आफैले लेखेको...
११ असोज, काठमाडौं । “लौ है कमरेड यो पटक उपत्यकामा एमालेको इज्जत जोगाउनुहोला ।” एमालेका उपत्यका समन्वय कमिटीका इन्चार्ज कृष्णगोपाल श्रेष्ठको ‘फेसबुक स्टाटस’ माथि धीरेन्द्रकुमारले दिएको प्रतिक्रिया हो यो । नेता श्रेष्ठले पार्टी अध्यक्ष...